Raggii dadka ku gowracay IKEA oo la sheegay in ay Eritrean ahaayeen | Somaliska
Booliska ayaa xaqiijiyay in labadii nin ee dadka ku gowracay dukaanka IKEA ee Västerås ay ka yimaadeen xero qaxooti oo ku dhow Västerås. Labada nin ayaa la sheegay in ay ka soo jeedaan wadanka Eritrea oo da’dooda tahay 35 iyo 23 sano jir. Wararka qaar ayaa markoo hore sheegay in ay Soomaali yihiin balse booliska ayaa xaqiijiyay in ay Eritrean ahaayeen.
Weerarka isniintii ka dhacay dukaanka IKEA ayaa noqday mid aad looga argagaxay, iyadoo dukaanka lagu gowracay haweenay waayeel ah iyo wiil ay ayeeyo u tahay oo ka yimid magaalada Skellefteå ee waqooyiga Sweden. Booliska ayaa weerarka ku tilmaamay midkii ugu foolxumaa ee ka dhaca Sweden.
Arintaan ayaa ah mid dhibaato weyn u keenaysa dadka Sweden qaxootinimad ka dalbanaya iyo magaca soo galootiga. Ragga ka dambeeyay weerarka ayaa wali xiran, iyadoo boolisku ay su’aalo waydiinayaan.
Sababta ay raggaan weerarka u geysteen ayaan wali cadeyn.
Dadka la dilly ma Eritrean ma Swedish mise waa Dal kale
War ninyahoow sida wax loo qoro baro
Fikrad aan lala dhicin 8 23
Waa fal waxshi-nimo waana wax aad u xun , balse Yeelkood hadday Afrikaan yihiin inay Soomaali ahayna la hubaa , kolkaa wax midabku nagu soo jiidaa maahan .
Mt Aniga says:
Kulmiye sxb raga wax dilay ayaa ah niman eleteriya u dhashay oo ka cabanayay in sharcigii loo diiday halka kuwa la dilayna ay ahaayee duq iyo wiil yar swedish ah lasoco sheekada isna ilaali hadaa joogto swedin
Waxan filiya in sharciga loodiiday ileyn imaanka aa yar wa ilaah mahadii hadaynan somali ehayn
Walal adigaan af somali aqri aqoon ayaan filaa. Waxaa la gowracay waa labo qof oo swedan ah, waxaana dilay ragaa qaxootiga ah. Hada ma fahantay. fadlan baro luqadad hooyo waa talo
waa arin aad u fool xun waana iska cadahay sabata waa eratheriyan wareesan si kastaba ha ahaate sweden runti sanadahan danbe aad beey uso dhawesay eratheriyanka oo waa lo hagar baxay lkn tan hada ee sameyen samen ween beey ku yeelanesa eratheriya iyo qaxootiga kalaba
sorry wa arin xun oo samaynaysa qoxootiga
waxaa mahad gaar leh ilaahii aan ka dhigin qaatiliinta gumaadaya dadkii ay hoyga iyo nabadgalyada bidayeen
in badan ayay eratheriyaaka qiimeyeen oo ay somalida hor mariyeen abalkoodiiba helay ee ilahay dhiiga biniaadka ha inaga ilaaliyo aaamin dhaha
Labada qof ee dhintay waa wiil 28 jira iyo hooyadiis oo 55 jir una joogay magaalada dalxiis.
Subxanallah, goortaan sheegay inaad tahay qof dadka somalida xumaan u saadaliya been may ahayn, koleyba markaagi hore wax fiicanba maad sheegi jirine maantana kanbad i keentay, wax kastoo xun oo sverige ka dhaca waxaad tidhaahda somali ayaa loo maleenayay, horta ya ku soo diray oo kugu yidhi somalidan maskaxda ka fadhisi oo niyad jabi, ada ugu danbeenta ku daali waxan aan macnaha lahayn ee aad qoreyso waanad ku niyad jebi, bal maalin uun wax fiican ka sheeg somalida kuna kalsoono somalinimadaada. Waaban nacay webkaaga iyo wararkaaga. Waa inaan magac ku raadsha “XUMAAN SAADALIYE” magacaas ayaa kugu soo baxaya
Tan kowaad, labo qof maha dadka wax dilay ee waa hal nin keliya. Tan labaad, labada qof ladilay maha islaan waayeel iyo cunug ayeeyo u tahay ee waa naag 55 jir ah iyo wiil 28 jir ey dhashay. Ninka wax dilay waa eritrean oo sharcigii loo diiday, italiya lagu celin rabay…aqbaarta sideey tahay usoo qor mise kaseexo meesha sxb.
Kani waa dadaalaa ee idinkaa dhiban.
Akhbaarta xoogaa ayuu kabood boodaa.
Akhristayaashana dhib Ayaa haysta oo waxaa u goynaya afka somaliga.
Waxkastaba ha ahaatee meesha waa sida uusheegey Nyhet qofka labaxay.
Waxaa dhacaysa in lajoojiyo Qaxootiga ka imaanaya dalalka muslimkaa.
Sida ay sameeyeen, dalal badan.
Ninka Eritreankaa hadii uuyahay sudani-Eritrean saamayn ayay kuyeelanaysaa.
Waxaa isweydiinleh muxuu kudilay habarta 55taa?.
Waa iney iska yareeeyaan dadka muslimkaa ee dalkooda kusoo Qulqulaya”
Hadii kale dhaqankooda Iyo jiritaankooda Ayaa kusugan khatar.
Fikrad aan lala dhicin 0 13
ninka la baxay CABDWELI maxaa kaa qaldan oo aad ninka eretritan ka ah ula aadin aadin SUUDAAN? mida kale maxaad ka xumeyneysaa ummadda muslimiinta ah oo aad u leedahay waa inay iska joojiyaan qaxootiga muslimiinta ah? ayagaagaba awood u leh cidda ay rabaan inay joojiyaane?
midda kale diin ba meesha lama keenine adi maxaa ku waalay oo muslimiinta kugu diray mise kuwii somalida ahaa ee muslimiinta dhibtooda magac ku raadsan jiray baa tahay waa yaabe.
cabdula waa talaalnyahay ayaan u maleeyaa waa dadka islaam nacaybku waa ka soo daahiray lkn waxaan ka baqanayaa inuu yidhaaho ama uu dafiro sinjiga hooyadii iyo aabihii waxaan leeyahay dalkaag diintaad iyo dadkaag soomaliyeed ha nicin dadkan aad dhex joogtid bari ka maalin haday ajaanibta nacaan adigaag isle mittbörjare ayaad tahay ayaa u horaynaya cida la saari doono ilaahow umadaad gaar ahaan somaliyaad diiintood dhaqankoog fahamsiii aaaminn
A.s warka ugu danbeyay waxay sheegayaan in ninka wax dilay inuu yahay 36 jir sidaas oo kale ,uu isaga naftiisa dhaawacay xun u geystay wuuna qirtay inuu wax dilay markii uu kasoo kacay Koma’.ninka labaad wax danbi ah malagu haayo waa 23 jir in la sii daayo ayaa la filayaa. labada nin-ba waa Eteritrean.Ninka 36 jir ah wuxuu lahaa balan loogu sheegi lahaa in lagu celinaayo Italy oo ah wadankii uu markii hore yurub kasoo galay oo faraha kasoo qaaday.